Antony telo mety hitranga amin'ny fifadian-kanina amin'ny fitsapana glucose Plasma> 7 mmol / L-Diabetes Talks-Sinocare
Antony telo mety hisian'ny fifadian-kanina amin'ny fitsapana glucose Plasma> 7 mmol / L
Fotoana: 2020-04-16 Hits: 229
Satria tsy azo tsaboina fotsiny ny glucose amin'ny plasma fifadian-kanina avo lenta amin'ny fampitomboana fotsiny ny fatran'ny hypoglycemics. Alohan'ny hahitana ny antony, ny vahaolana dia mety tsy hitovy tanteraka amin'ny haavon'ny glucose glucose amin'ny fifadian-kanina.
Inona ny glucose glucose amin'ny fifadian-kanina?
Ny glucose amin'ny glucose amin'ny fifadian-kanina dia midika hoe ny haavon'ny glucose ao anaty ra refesina aorian'ny fifadian-kanina mandritra ny 8 ~ 12 ora (izany hoe ny sakafo rehetra tsy azo alaina, fa ny rano kosa azo sotroina).
Amin'ny ankapobeny, ny haavon'ny glucose amin'ny ra dia heverina ho avo loatra raha mihoatra ny 7 mmol / L ny glucose amin'ny glucose amin'ny fifadian-kanina.https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_sugar_level
Mba hahafantarana ny fomba fitsaboana, ny antony mahatonga ny glucose amin'ny plasma be loatra amin'ny fifadian-kanina dia tokony ho hita aloha.
1. Sakafo fisakafoanana tafahoatra amin'ny alina lasa teo.
Ity no antony mahazatra indrindra amin'ny glucose amin'ny plasma fifadian-kanina avo lenta, izay mifandraika amin'ny habetsaky ny sakafo sy ny kalitaon'ny sakafo hariva amin'ny alina.
Miaraka amin'ny fihoaram-pefy tafahoatra nefa tsy misy fanatanjahan-tena aorian'ny fisakafoanana dia tsy dia misakafo loatra ny alina, mba hampitomboana ny siramamy avoakan'ny sakafo ho ra. Mazava ho azy fa ny glucose amin'ny plasma fifadian-kanina avo dia mety vokatry ny sakafo hariva ihany koa.
Ho fanampin'izany, ny glucose glucose amin'ny fifadian-kanina avo lenta koa dia mifandraika amin'ny toetry ny fitsaharana sy ny toetran'ny torimaso amin'ny alina. Raha torimaso ratsy sy tsy mahita tory no miseho amin'ny alina na raha toa tsy ratsy ny fihetseham-po sy ny havizanana amin'ny alina, dia miovaova ny glucose amin'ny plasma amin'ny fifadian-kanina, ary avo na ambany indraindray.
Raha miseho imbetsaka mandritra ny fotoana maro ny glucose glôsy amin'ny fifadian-kanina, dia tsy maninona loatra izany, ary azo hatsaraina ny hyperglycemia amin'ny alàlan'ny fifehezana ny sakafo sy ny fivezivezena aorian'ny sakafo ihany. Raha matetika mitranga ny glucose glucose mahery mifady hanina dia tokony hodinihina ireto lafin-javatra roa manaraka ireto.
2. Trangam-pandrenesana diabeta mellitus: ny haavon'ny glucose ao anaty ra dia tsy ambany amin'ny alina fa miakatra maraina
Ny glucose amin'ny rà dia tsy vitan'ny angovo avoaka amin'ny sakafo ihany, fa fehezin'ny hormonina isan-karazany, izay mety hampitombo ny haavon'ny glucose ao anaty (anisan'izany ny glucocorticoid sy ny hormone mitombo ary ny hafa.).
Raha vao mangiran-dratsy dia manomboka miakatra tsikelikely ireo hormonina ireo, izay mihetsika amin'ny glycogen voatokana ao amin'ny atiny / hozatra ary mivoaka amin'ny lalan-drà; avy eo miakatra arak'izany ny haavon'ny glucose ao anaty ra.
Amin'ny siansa ara-pitsaboana, ny fiakaran'ny haavon'ny glucose amin'ny rà maraina amin'ny maraina dia antsoina hoe tranga diabeta mellitus maraina. Noho ny fitaoman'ireo hormona hyperglycemic dia miakatra tsikelikely ny haavon'ny glucose ao anaty ra. Noho izany, ny glucose amin'ny plasma fifadian-kanina dia mety ho avo kokoa noho ny glucose alohan'ny homamiadana amin'ny alina lasa teo.
Ahoana ny fanaraha-maso? Rehefa tena marin-toerana ny glucose amin'ny ra ary tsy hitranga amin'ny alina ny hypoglycemia fa miakatra miadana tsikelikely ny glucose ao anaty maraina amin'ny maraina ary tampoka ny glucose amin'ny glucose alohan'ny sakafo maraina dia dinihina ny fisehoan'ny diabeta mellitus maraina.
Ahoana no hitsaboana? Miorina amin'ny fikirizan'ny fitsaboana ara-tsakafo mahazatra, ny fotoana fisakafoanana dia azo ampitomboina tsara (izany hoe 4 ~ 5 isan'andro).
Mandritra izany fotoana izany dia tokony hitombo ny tsakitsaky iray ora iray eo ho eo alohan'ny hatory amin'ny alina; sakafo kely misy gliosida sy proteinina azo alaina, toy ny ronono iray vera, lovia kely iray na mofo vitsivitsy. Amin'ny alàlan'ny fomba toy izany, ny habetsaky ny tsiambaratelo sy ny fahatsapana ny insuline amin'ny alina dia azo hatsaraina tsara kokoa.
Na, ny dokotera dia hita mivantana hanitsy ny fomba fitsaboana ary hampitombo ny fatra hypoglycemics.
3. Vokatry ny Somogyi: ambany loatra ny haavon'ny glucose amin'ny rà amin'ny alina, fa miakatra maraina
Rehefa mora hita ny hypoglycemia amin'ireo mararin'ny diabeta, dia manomboka amin'ny vatany ny rafitra miaro, ary mitombo ny tsiambaratelon'ny hormonina hyperglycemika voalaza teo aloha, mba hampiakarana ny haavon'ny glucose amin'ny ra ary hiteraka hyperglycemia faharoa. Ity tranga ity dia antsoina hoe vokan'ny Somogyi.
Mba ho mendrika hampandrenesina, amin'ny mararin'ny diabeta misy vokan'ny Somogyi, ny soritr'aretina mahazatra amin'ny hypoglycemia indraindray dia tsy mitranga toy ny palpitation sy ny hatsembohana mangatsiaka; Mandritra izany fotoana izany, satria matory izy ireo, dia mampidi-doza tokoa ny fisian'ny koma hypoglycemic.
Ny hypoglycemia amin'ny misasakalina dia maminavina ny fanombohan'ny nofy ratsy.
Ahoana ny fanaraha-maso? Mba hampihenana ny fitaomana eo amin'ny torimaso, ny glucose amin'ny ra dia arahi-maso amin'ny 2:00 ~ 3:00 maraina Raha avela ny fepetra dia tokony hatao 24h ny fanaraha-maso ny glucose amin'ny ra ao amin'ny hopitaly.
Raha misy hypoglycemia aseho amin'ny fandrefesana amin'ny 0: 00 ~ 4: 00 (ie .3.9 mmol / L), ny fiakaran'ny glucose plasma fifadian-kanina alohan'ny sakafo maraina dia vokatry ny vokatry Somogyi.
Ahoana no hitsaboana?
Izy io dia tanjona mialoha hamahana ny vokan'ny Somogyi ny fihinanana sakafo / fanaovana fanatanjahan-tena tsy tapaka ary mihinana hypoglycemics amin'ny fatra mety.
Ho an'ireo mararin'ny diabeta nahazo zava-mahadomelina sulfonylureas efa niasa ela (toy ny Gliclazide Sustained-release Tablets and Glimepiride Tablets), ny prinexy insuline ary ny insuline na medium-na insuline maharitra, dia tokony hifantohana manokana ny fiantraikan'ny vokatry Somogyi.
Ny fisarahana sakafo dia fepetra tsara hisorohana ny voka-dratsin'ny Somogyi.
Ao amin'ny mararin'ny diabeta misy glucose amin'ny ra (> 10 mmol / L) sy glucose ambany amin'ny homamiadan'ny olona, ​​ny 1/3 amin'ny sakafo hariva dia azo alaina amin'ny 21:30 ~ 22:00
Raha <6.5 mmol / L ny gliokaozy alohan'ny fanambadiana, dia azo jerena ny fihinanan-kanina.
Tsara homarihina fa raha ahitsy amin'ny alina ny sakafo dia tsy maintsy arahi-maso ny glucose amin'ny ra aorian'ny sakafo hariva na alohan'ny hatory.
Amin'izao fotoana izao, biscuit soda 4 na ronono iray vera (225 ml) no ampiana tsara; ny ahiahy be loatra dia tsy tokony aloa raha misy hyperglycemia aorian'ny sakafo alohan'ny hatory; tokony ho fantatrao fa misy fahavoazana lehibe kokoa hitranga aorian'ny fisian'ny hypoglycemia.
Tsara homarihina, ireo fomba ireo dia fomba fitsaboana vetivety fotsiny ho an'ny diabeta mellitus tranga vao maraina na effet Somogyi.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, raha mila ahitsy ny hypoglycemics dia tsara kokoa ny fahitana dokotera ara-potoana hanaovana fitsaboana. Ny régime fitsaboana sahaza indrindra no hifidianan'ny mpitsabo arakaraka ny tena toe-pahasalaman'ny aretina.
Noho izany, ny glucose mahery amin'ny plasma fifadian-kanina dia matetika vokatry ny antony efatra:
1. Mihinana sakafo be loatra amin'ny alina lasa teo. Vahaolana: Makà sakafo kely kokoa; na mampihena tsara ny habetsahan'ny fihinanana sakafo matavy sy proteinina.
2. Torimaso ratsy alina. Vahaolana: Mandehana mialoha matory hidirana amin'ny fomba torimaso; ary aza mizaha telefaona finday alohan'ny hatory.
3. Diabetes mellitus tranga vao mangiran-dratsy. Vahaolana: manaova sakafo bebe kokoa isan'andro fa aza kely ny sakafo isaky ny misakafo; na hampitombo ny fatra hypoglycemics omena alohan'ny hatory eo ambany fitarihan'ny dokotera.
4. Vokatry ny Somogyi. Vahaolana: raha <6.5 mmol / L ny gliokaozy alohan'ny fanambadiana, dia tokony hosotroina ronono iray vera, na hakana biskoitra vitsivitsy.
Pejy manaraka: Fahalalana ilaina ho an'ny ankizy mararin'ny diabeta